कोरोनाको केन्द्र बन्यो काठमाडौँ उपत्यका, पुनः लकडाउन/निषे`धाज्ञाको तयारी ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोनाको केन्द्र बन्यो काठमाडौँ उपत्यका, पुनः लकडाउन/निषे`धाज्ञाको तयारी !
काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्य कामा पुनः बन्दाबन्दी वा निषे धाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रति दिन बढ्दै गएसँगै उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी गरिएको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ हजार नाघेसँगै तीनवटै जि ल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु तीनवटै जिल्लामा पुनः लक डाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
संक्रमितको संख्या दिन दिनै बढ्दै गएको, सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्यका मापद ण्डहरुको पालना नग`रिएको, काठमाडौं बाहिरबाट लुकिछिपी उपत्यकामा भित्रिने क्रम नरोकिएको पाइएसँगै पुनः लकडाउन वा निषेधाज्ञा बारे आफूहरु छलफलमा जुट्न ला`गेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताएका छन्।
आज बस्ने तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु सहिको बैठकले आवश्य क निर्णय लिने बता इएको छ। कोरोना भाइरस संक्र मणको जोखिम र फैलावटको अवस्था हेरेर स्थानीय प्रशासनले नै आवश्यक निर्णय गर्न पाउने अधिकारि सरकारले दिसकेको छ। सरकारले अधिकार दिएसँगै लकडाउन गर्ने अथवा निषेधाज्ञा जारी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको मातहत आइपुगेको छ।
कोभिड–१९ को सङ्क्र मण बढदै गएपछि उपत्य`कामा पनि सङ्क्र मित बढेका छन् । अहिले सम्म उपत्यकामा दुई हजार भन्दै बढी कोरोना संक्रमित फेला परिसकेका छन्। उपत्यकामा बन्दाबन्दी खुलेपछि सङ्क्रमित बढ्न थालेका हुन् ।
उपत्यकामा सबै भन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा संक्रमित छन्। काठमाडौँमा १ हजार ७ सय भन्दा बढी संक्रमित छन्, भक्तपुरमा करिब १ सय ५० र ललितपुरका २ सय ८० भन्दा बढी संक्रमित छन्।